हरियालीले बच्चाको स्मरण शक्ति यसरी बढाउँछ भन्छन् विज्ञहरु - यादका टुक्रा
हरियालीले बच्चाको स्मरण शक्ति यसरी बढाउँछ भन्छन् विज्ञहरु
हामी चाहन्छौं, बच्चाको स्मरण क्षमता राम्रो होस् । उनीहरुको मस्तिष्कले कुनैपनि कुरा चाडै बुझ्न र सम्झन सकोस् । त्यसो भयो भने किताबको वा कक्षाकोठाको कुरा सजिलै बुझ्न सक्नेछन् । पढाईमा अब्बल हुनेछन् । परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्नेछन् ।
यसका लागि तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ? – अक्सर अभिभावक बच्चालाई किताव वा पढाईमा ध्यान केन्दि्रत गर्न प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् । जति धेरै पढ्यो, उत्ति धेरै जान्दछन् भन्ने अभिभावकको मानसिकता हुन्छ । कतिपयले खानपान र योग एवं ध्यानको माध्यामबाट पनि स्मरण क्षमता बढाउँछ भन्ने तथ्य बुझेका हुन्छन् । बच्चाको स्मरण क्षमता बढाउने कसरी त ? के छ यसको माध्याम ? के हो यसको विधी ? यसबारे खोज-अनुसन्धान निरन्तर जारी छ । र, हालैको एक अध्ययनले नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।
हरियालीले स्मरण क्षमता बढाउने – हराभरा रुख र विरुवाले हामीलाई अत्यावश्यक अक्सिजनमात्रै दिँदैन । यसले वरिपरिको वातावरणलाई स्वच्छ, सुन्दर बनाउँछ र मानिसहरुलाई स्वस्थ बनाउँछ । यतिमात्रै होइन हरियाली युक्त वातावरणले बच्चाको स्मरण क्षमता पनि बढाउने तथ्य पत्ता लागेको छ । यस कुराको खुलासा बेलायतका वैज्ञानिकहरुले आफ्नो एक शोधमा गरेका हुन् । शोधमा संलग्न बेलायतस्थित युनिभर्सिटी कलेज लण्डनका शोधकर्ताहरुका अनुसार हराभरा रुख-विरुवायुक्त वातावरणको प्रभाव बच्चाको स्मरणशक्तिमा पनि पर्छ । ती बच्चाहरु जो रुख विरुवाले घेरिएको हरियालीले भरिएका शहरहरुमा रहन्छन्, उनीको स्मरण क्षमता अन्य बच्चाको तुलनामा राम्रो हुने कुरा शोधमा पाइयो ।
कहाँ र कसले गरे अध्ययन ? – ‘बि्रटिश जर्नल अफ एजुकेशन साइकोलोजी’मा प्रकाशित उक्त शोधपत्रमा हरियालीको एकाग्रतासँग गहिरो सम्बन्ध हुने कुरा बताइएको छ । यस्तो हरियालीयुक्त स्थानले बच्चाको ध्यान भंग हुनबाट रोक्ने र उनीहरुको पढाईमा उपयोगी हुने शोधपत्रमा उल्लेख छ । शोधकार्यमा संलग्न युनिभर्सिटी कलेज लण्डनकी एरिनी फ्लोरीले भनेकी छिन्, ‘हाम्रो अध्ययन केवल बच्चाहरुको प्रभावकारी विकासको लागि मात्रै होइन, राम्रा शहरी योजनाहरु तयार गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
‘शहरमा रुख-विरुवाको आवश्यकता हावालाई सफा र स्वच्छ राख्न मात्रै होइन, बच्चाको शिक्षाको स्तरलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि पनि पर्छ भन्ने कुरा अध्ययनबाट थाहा भयो’ फ्लोरीले भनेकी छिन्, ‘यसैले हामीले आफ्नो वरिपरिको इलाकालाई हराभरा बनाउन आवश्यक छ ।’ गाउँ एवं नगरको प्रशासनले मात्रै होइन आम नागरिकले पनि रुखविरुवा लगाउने बारेमा सोच्नुपर्छ । आखिरमा यो तपाईं हाम्रा बच्चाको भविष्य सँग जोडिएको सवाल पनि हो ।
कसरी गरियो ? – अध्ययनमा बेलायतका विभिन्न शहरमा बस्ने ११ वर्ष उमेर समूहका ४ हजार ७ सय ५८ बच्चाहरुलाई समावेश गरिएको थियो । अध्ययनमा उनीहरुको स्मरण क्षमताको स्तर पत्ता लगाइएको थियो । यसबाट हरियाली र बच्चाको स्मृति बीच गहिरो सम्बन्ध रहेको कुरा अगाडि आएको थियो छ । जुन बच्चाहरुको घर वरिपरि रुखविरुवा थियो उनीहरुको स्मरण शक्ति अन्य बच्चाको तुलनामा धेरै राम्रो थियो ।
के देखियो नतिजा ? – फ्लोरी भन्छिन्, ‘हाम्रो शोधले संज्ञात्मक ज्ञानमा हरियालीको सकरात्मक भूमिकालाई बताउँछ । यसको सिधा असर बच्चाको शैक्षिक उपलब्धिमा पर्छ । खासगरि गणित विषयमा यसको सबैभन्दा ठूलो असर पर्छ जसमा धेरै शुत्रहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
Don't Miss it ‘ट्यालेन्ट शो’को नाममा बच्चामाथि दवाब त परेको छैन ? जानिराख्नुहोस्
Up Next यी ९ कुरा बालबालिकालाई सिकाउनुहोस्, यी ९ कुरा सिकाउनु भयो भने बालबालिका कहिले बिरामी हुदैनन्
1 day ago 490 Views
1 day ago 335 Views
1 day ago 431 Views
हुन पनि कान्छो सन्तानलाई काखको सन्तान भनिन्छ । कान्छो सन्तानका पनि सन्तान भए पनि आमाहरु कान्छो सन्तानलाई सानै देख्छन् ।…
1 day ago 1282 Views
यी हुन् प्रभावकारी उपाय बच्चाको बौद्धिक क्षमता बढाउन ?
हरेक अभिभावक चाहन्छन्, आफ्ना सन्तान क्षमतावान् होस् । बौद्धिक होस् । तार्किक होस् । हरेक किसिमको गुणले भरिपूर्ण होस् ।…
3 weeks ago 1738 Views
किन गर्नै पर्ने बिहे ? बिहे गर्दा र नगर्दा यस्तो फरक पर्ने रहेछ, थाहा छ ?
नेपालीमा एउटा भनाई छ, ‘जन्म, मृत्यु र विवाह जन्ममै लेखिएर आएको हुन्छ ।’ भलै यस्ता कुरालाई आडम्बरको रुपमा लिन सकिएला…
8 months ago 4363 Views
2 days ago 15858 Views
2 days ago 9239 Views
1 day ago 6316 Views
1 day ago 3439 Views
2 days ago 3189 Views
1 day ago 2306 Views
1 day ago 1971 Views
2 days ago 1831 Views